दुबई काण्डदेखि एकपिच्छे अर्काे काण्ड, के हो वास्तविकता ? | दुबई काण्डदेखि एकपिच्छे अर्काे काण्ड, के हो वास्तविकता ? – हिपमत
दुबई काण्डदेखि एकपिच्छे अर्काे काण्ड, के हो वास्तविकता ?
काठमाडौं , १९ माघ:हिजो आज नेपालमा काण्डको नामले अश्लिल भिडयोहरू सार्वजनिक हुदैँ आएको छ । कहिले जापान का ण्ड त कहिले बस का ण्ड, अश्लिल भिडियोको चर्चा समाजिक संजालमा हुँदै आएको छ । केही दिन अघिमात्र अष्ट्रलिया का ण्ड भन्दै अष्ट्रलियामा रहेका नेपाली महिलाहरूको ब दना म गरियो । अहिले भने दुबई का ण्डको नामले राखिएको अ श्लि ल भिडियो फेसबुकमा व्यापक भाईरल भईरहेको छ । सम्बन्धमा रहदा सम्झदारिमा सं भो ग हुनु र सम्बन्ध टु टेपछि ब द लाको भावले भिडियो लिक हुनु नेपालमा सामान्य बनिसकेको छ ।
चर्चित अ श्लि ल वेभसाइटहरूमा नेपालका थुप्रै अ श्लि ल भिडियोहरू सार्वजनिक गरिएको छ । ती भिडियोहरूलाई लाखौँले हेरि सकेका छन् । कुनै समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उच्च विन्दुमा रहेकि नम्रता श्रेष्ठको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । ब्वाईफ्रेन्डसँग सं भो गको भिडियो सार्वजिनक भएपछि उनको करिअरमै आँच पुगेको थियो । तर, नम्रताको सिनेमामा कम्ब्याकले ठूलै तहल्का पिट्यो । उनको हरेक फिल्म अहिले हिट भईरहेको छ ।
का ण्ड को वास्तविकता यस्तोः
दुबई का ण्ड
केहि दिन यता दुबई का ण्ड को नामले सामाजिक संजालमा नेपाली युवायुवतिको अ श्लि ल भिडियो भा इरल भइरहेको छ । चर्चित अ श्लि ल वेभसाइटमा समेत अपलोड गरिएको उक्त भिडियोलाई लाखौँले हेरिसकेका छन् । नेपाली युवायुवतिको संवाद र सं भो गको दृश्य अहिले भाइरल नै बनिरहेको छ । उक्त भिडियोमा केटाले नै भिडियो बनाएका छन् । सं भोग गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि धेरैले टिकाटिप्पणी पनि गरेका छन् । युवतिले सहजै भिडियो गर्न दिनु र केहि समयमै उक्त भिडियो समाजिक संजालमा आउनुमा ग ल्ति महिला र पुरुष दुवैको देखिन्छ । त्यसैले, क्यामरको अगाडी अ श्लि ल भिडियो कैद गर्न दिनुनै बेव कुफि हो ।
अष्ट्रलिया का ण्ड
अना वश्यक रुपमा अष्ट्रलियामा रहेको नेपालीको बदनाम गराएको भिडियो हो, अष्ट्रलिया का ण्ड । विदेशि महिलाको अ श्लि ल भिडियोलाई नेपाली भनेर समाजिक संजालमा चर्चा गरियो । यतिमात्र नभएर धेरैले अष्ट्रलियामा रहेका नेपालीहरुको बे इज्ज त समेत गर्न भ्याए । तर, वास्तविकता भने फरक थियो । उक्त भिडियो न कुनै नेपालीको थियो न अष्ट्रलियाको नै । तर, नेपाली जस्तो देखिने युवति भन्दैमा अष्ट्रलियामा रहेका नेपाली युवतिहरुलाई नै असर पुग्ने गरि अ फ वाह फैलाउनु गलत हो ।
जापान का ण् ड
नशामा लठ्ठिएर न ग्न हुँदै भिडियोमा देखिएका युवायुवति नेपाली हो भन्ने थाहा पाएपछि नेपालमा उक्त भिडियो भा इरल नहुने कुरै भएन । हुदैँ नभएको पात्रलाई उभ्याएर बे इज्ज त गर्ने नेपाली समाजले जापान का ण्ड का युवायुवतिको व्यापक बे इज्ज त गरे । उक्त भिडियो कस्ले र कहाँ सार्वजनिक गर्यो, त्यो सार्वजनिक भएको छैन । जापान का ण्ड भनेर नाम दिइएको उक्त भिडियोमा नेपाली संवाद प्रष्टै सुनिन सकिन्छ ।
समाजिक संजाल लगायत अ श्लि ल वेभसाइटहरुमा अपलोड भएका भिडियोहरु साइटमा कहिले अपलोड भयो भन्नेसमेत उल्लेख छ । यसरी अपलोड हुने भिडियोहरु सबैभन्दा बढि जो सँग महिलाले बिश्वास गरेर अ श्लि ल भिडियोका लागी तयार भएका हुन्छन उनिहरुबाटै अपलोड हुने गरेको अनुसन्धानमा सक्रिय प्रहरी बताउँछन । त्यसबाहेक कहिलेकाही नजिकका साथीभाई वा छिमेकीहरु मार्फत यस्ता घटना हुने गरेका छन् ।
केही समयपहिले कतारमा कार्यरत पतिसँग भएको ना ंगो भिडियो च्याट भोलिपल्ट युट्युवमा अपलोड भएपछि तनहुँकी एक महिलाले आफन्तको सहयोग प्रहरीमा उजुरी हालिन् । २ सय बढिले हेरेपछि युट्युवबाट हटाईएको त्यो भिडियो उनकै श्रीमानसँग बस्ने साथीले युट्युवमा हालिदिएको खुलासा भएको थियो ।
एउटै ल्यापटप प्रयोग गर्ने साथीले आफु काममा गएको बेला उक्त भिडियो भेटेर सामाजिक सञ्जालमा हालिदिएको ति महिलाले सुनाईन । त्यस्ता भिडियोहरुमा ‘भण्डारीकी बुहारी नु हा उँदै गरेको’ ‘छिमेकी गुरुङ्नी भाउजु’ मगर्नी दिदि, तामाङ्नी यूवती जस्ता नामले धेरै महिलाकै अपमान हुने गरी साइटमा पोष्ट भइरहेका छन् । यसका साथै जापानमा रहेका नेपालीको भिडियो, अस्ट्रेलियामा नेपाली से क्स भनेर पनि भिडियो अपलोड गरेका छन् ।
सजग हुने कि ?
नेपाली अ श्लि ल भिडियोहरु एकपिच्छे अर्को सार्वजनिक हुनुमा थुप्रै कारणहरु छन् । सजिलै विश्वास गर्ने, भिडियो गर्न अनुमित दिने लगायत ला पर्वा हीका कारण भिडियोहरु लि क हुदैँ आएको छ । लुकि छि पि भिडियो बनाएर पनि अ श्लि ल वेभसाइटहरुमा सार्वजनिक गरिएको छ । विशेषगरि, अधिकांश नेपाली अ श्लि ल भिडियोमा युवतिहरुले भिडियो नखिच्न आग्रह गर्दागर्दै पनि पुरुषले भिडियो कैद गर्ने गरेका छन् । मनमुटाव भएपछि पनि रि स पो ख्नकालागि भिडियोनै सार्वजनिक गर्दिने देखि ब्ल याक मेलिङ समेत गर्ने गरेको पाईएको छ । तसर्थ, यस विषयमा युवतिहरु अलि बढि सजग हुन आवश्यक छ ।
भिडियो बनाउने उन्मा द
एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको ‘बस का ण्ड’ प्रकरणलाई लिएर प्रहरीले एक जनालाई एक वर्षपछि प क्राउ गर्यो । बसको सिटमा बसेर वि र्य खसाल्दै महिलाको कपालमा लगाइदिने अ परा धिलाई प्रहरीले प क्राउ गरिसकेको छ । हिजोआज अ श्लि ल भिडियो बनाएर भाइरल बनाउने ट्रेन्ड नै चलेको छ । अ श्लि ल भिडियो सार्वजनिक हुँदा क्षणिक समयको लागि कसैलाई आनन्द आउला तर ती युवतिले व्यक्तिगत जिवनमा कति ला छ ना भोग्नु पर्ने हुन्छ त्यो कसैले नसोचेको अवस्था छ । तसर्थ, क्षणिक खुसी वा ब द लाको भावले कसैको व्यक्तिगत जिवन बि गा र्ने अधिकार कसैको छैन । यस्ता अ परा धि हरुलाई कानुन बमोजिम का र्वाही हुनुपर्छ ।